China Double jekiseni Kuumbwa Manufacturer uye nokutengesa | Mestech
Double jekiseni Kuumbwa epurasitiki Kuumbwa maitiro umo maviri seti eforoma panguva imwe chete jekiseni pane imwechete jekiseni muchina kuumba chikamu chimwe chemaviri epurasitiki zvinhu.
Double jekiseni Kuumbwa (inonziwo kaviri kupfura kuumbwa, maviri-jekiseni jekiseni).
Double jekiseni Kuumbwa chinhu epurasitiki Kuumbwa maitiro umo maviri seti anoumba vari panguva imwe chete jekiseni pamusoro chete jekiseni muchina kuumba chimwe chikamu maviri akasiyana epurasitiki zvinhu. Dzimwe nguva zvinhu zviviri izvi zvine mavara akasiyana, dzimwe nguva zvinhu zviviri zvakaomarara zvakasiyana uye zvakapfava, nekudaro kuwana izvo zvinodiwa zvemuchina uye aesthetics yechigadzirwa.
Iko kushandiswa kweviri-jekiseni repurasitiki muforoma uye zvikamu
Izvo zvikamu zvepurasitiki zvakagadzirwa kunyangwe zvakapetwa-jekiseni kuumbwa zvave kushandiswa zvakanyanya mune zvigadzirwa zvemagetsi, maturusi emagetsi, zvigadzirwa zvekurapa, midziyo yemumba, matoyi uye angangoita ese mamwe epurasitiki minda. Iyo kugadzirwa uye kuumbwa kwemaviri-ruvara rwekuumbwa, pamwe nekutsvaga pamwe nekuvandudzwa kwemaviri-eruvara jekiseni kuumbwa michina uye mbishi zvigadzirwa zveviri-ruvara jekiseni kuumbwa zvakagadzirawo nekukurumidza.
Ratidza kesi yezvikamu zviviri-zvejekiseni
Mhando mbiri dzakasiyana dzeplastiki dzinoshandiswa, uye zvigadzirwa zvepurasitiki zvinogona kunyatso kusiyaniswa pakati pemhando mbiri dzeplastics dzinodaidzwa kuti mbiri-jekiseni zvikamu.
Ndezvipi zvakanakira kaviri jekiseni Kuumbwa?
Zvichienzaniswa chinyakare jekiseni Kuumbwa, hunyambiri-zvinhu co-jekiseni Kuumbwa kwacho kune zvinotevera zvakwakanakira:
1. Mativi emukati nekunze ezvikamu anotora zvakasiyana zvinhu zvine hunhu hwakasiyana, senge idzo dzine simba rakanaka muchikamu chemukati uye idzo dzine ruvara kana zviyo pamusoro pekunze, kuti uwane zvakakwana kuita uye kutaridzika kushanda.
2. Chinyorwa chakapfava-kuomarara kubatana: Muviri mukuru wechikamu unoshandisa zvigadzirwa zvakaomarara, gungano rinowirirana pamusoro nekushandisa rakapfava resin (TPU, TPE) inogona kutamba yakanaka kwazvo yekuisa chisimbiso pachigadzirwa, senge isina mvura, guruva-chiratidzo.
3. Zvinoenderana nehunhu hwekushandisa hwakasiyana, senzvimbo yepamusoro yezvinhu zvinorema inoshandisa dura repurasitiki rakapfava, muviri kana musimboti wechikamu unoshandisa rakaomarara repurasitiki kana plastiki ine furo inogona kudzikisa huremu.
4. Yakadzika-yemhando yepamusoro zvigadzirwa zvinogona kushandiswa kudzikisa mutengo.
5. Iyo yepakati zvinhu zvezvikamu zvinogona kushandisa zvinodhura uye zvakasarudzika nzvimbo zvivakwa, senge anti-remagetsi kupindira, kukwirira kuitisa uye zvimwe zvinhu kuti zviwedzere chigadzirwa kuita.
5. Kumusoro kana musimboti wezvikamu zvinogona kugadzirwa nezvinhu zvinodhura zvine hunyanzvi hunhu, senge kupesana nemagetsi emagetsi, kuitisa kwepamusoro uye zvimwe zvinhu kuti zviwedzere kushanda kwechigadzirwa.
6. Kusanganisa kwakakodzera kwecortical uye yepakati zvinhu zvinogona kudzora kusara kwekushushikana, kuwedzera simba remuchina kana zvimiro zvepamusoro zvezvikamu.
7.Kuchienzaniswa nekuwedzeredza, ine zvakanakira hukuru muhunhu, mutengo uye negoho.
Kukanganisa kaviri jekiseni Kuumbwa
1. Izvo zvinodikanwa kuisa mari mukutenga kwekaviri-jekiseni kuumbwa muchina.
2. Kufananidzwa kwemaviri-jekiseni kuumbwa kunoda kunyatsoita: iyo yekuumbika kumashure ine zvakafanana zvinodiwa. Kana icho chigadzirwa chiine dhizaini shanduko, ese mafuru anofanirwa kuita shanduko dzakafanana kuona zvakafanana. Izvi zvinowedzera mutoro webasa kugadziriso yeavo vanofa.
3. Double jekiseni Kuumbwa muchina ndeyekuti maviri mapaundi eakagovana anogovera nzvimbo uye simba rakafanana jekiseni kuumbwa muchina, saka zvihombe-zvigadzirwa hazvigone kubayiwa jekiseni.
Musiyano pakati kaviri jekiseni Kuumbwa kwacho uye overmolding muitiro
Double jekiseni Kuumbwa uye overmolding vari yechipiri jekiseni Kuumbwa, asi vari zvakasiyana.
1. Overmolding muitiro anoumba, aizivikanwawo yechipiri Kuumbwa, dzinoitwa pamusoro zvavo jekiseni Kuumbwa michina. Chigadzirwa chinoumbwa mumatanho maviri. Mushure mekunge chigadzirwa chabviswa pane imwechete seti mafuru, chinoiswa mune imwe seti yeforoma yechipiri jekiseni kuumbwa. Naizvozvo, zvavo jekiseni Kuumbwa muchina unoshandiswa for overmolding muitiro.
2. Double jekiseni kuumbwa ndeyekuti maviri marudzi epurasitiki zvigadzirwa akajowa pane imwechete jekiseni kuumbwa muchina, achiumba kaviri, asi chigadzirwa chinongobuda kamwe chete. Kazhinji, iyi mhando yekuumba maitiro inonziwo zvakapetwa zvinhu jekiseni kuumbwa, iyo inowanzo kupedzwa neese maviri mafuru uye inoda yakakosha kaviri-jekiseni kuumbwa muchina.
3. Double jekiseni Kuumbwa inzira inoenderera yekugadzira. Iyo haina mashandiro ekutora kunze uye kuisa zvikamu mukati, inochengetedza nguva uye kukanganisa kwekumisazve zvikamu, inodzora zvakanyanya mwero wekushomeka kwekugadzira, uye inovandudza zvakanyanya chigadzirwa chemhando uye kugadzirwa kwekuita zvichienzaniswa nekuwedzeredza maitiro.
4. Kuwedzeredza maitiro kwakakodzera jekiseni kuumbwa kwezvigadzirwa zvine yakaderera mhando zvinodiwa uye zvidiki mirairo. Yakaganhurirwa neyakajairwa yekaviri-jekiseni kuumbwa muchina, kazhinji haina kukodzera jekiseni kuumbwa kwakakura zvikamu.
5. Iwo maviri epamberi maforoma eakaviri-jekiseni anoumba anofanira kunge akafanana, uye encapsulation molds haina ichi chinodiwa. Naizvozvo, iko kurongeka uye mutengo weakaviri jekiseni mafomu akakwirira kupfuura eakavharidzirwa jekiseni.
Iwo matipi eakaviri-jekiseni kuumbwa maitiro:
1. Mukuita kweiri-jekiseni jekiseni kuumbwa, pane izvo zvina zvakakosha zvinhu: kaviri-jekiseni kuumbwa muchina, kaviri-jekiseni muforoma, yakakodzera plastiki zvinhu uye zvine musoro chikamu dhizaini.
2. Chinyorwa Sarudzo yeSoft uye Yakaomarara Rubha kaviri-jekiseni Kuumbwa Panofanira kunge paine imwe tembiricha mutsauko pakati pechinonyungudika chemhando mbiri dzezvinhu zvemaviri-mavara jekiseni kuumbwa. Kazhinji, zvinokurudzirwa kuti poindi yekunyungudika yezvinhu zvekutanga zvejekiseni ive pamusoro pane iyo yechipiri jekiseni zvinhu, uye kuti nzvimbo yekunyunguduka yeyakatanga jekiseni zvinhu ive yakakwirira kupfuura iyo yechipiri jekiseni zvinhu.
3. Kujekesa jekiseni yezvinhu zvinoonekera uye zvisina kujeka: iro rekutanga kupfura rakagadzirwa nezvinhu zvisina kujeka, uye yechipiri kupfura kunoitwa nezvinhu zvinoonekera. Semuenzaniso, zvinhu zvisiri pachena izvo zvinowanzo kuve PC ine yakanyanya tembiricha yezvinhu, uye PMMA kana PC inoshandiswa kune yechipiri yakajeka zvinhu. PC inoda kuchengetedzwa nekusasa UV. PMMA inogona kusarudza UV kana kuomesa. Kana paine mavara pamusoro, inofanira kusarudza UV.
Chii kaviri jekiseni Kuumbwa muchina?
The jekiseni Kuumbwa muchina ane maviri emiti uye jekiseni maitiro uye chinzvimbo kutendeuka mashandiro eforoma anonzi kaviri-jekiseni Kuumbwa muchina, uyo unoshandiswa kaviri-ruvara jekiseni Kuumbwa. Jekiseni Kuumbwa michina inowanzo kuve nemhando mbiri: yakafanana jekiseni Kuumbwa muchina nejekiseni sikuruwa uye yakamira jekiseni Kuumbwa muchina nejekiseni sikuruu.
Chii chinonzi kaviri-jekiseni Mould?
Iyo chakuvhuvhu inobairira marudzi maviri epurasitiki mukutevedzana uye inogadzira maviri-mavara zvigadzirwa zvinonzi maviri-ruvara chakuvhuvhu. Maviri-mavara jekiseni anoumba anowanzo kuve maviri seti eakaumbwa echikamu chimwe, chinoenderana neyekutanga neyechipiri kupfura zvichiteerana. Yekumashure kufa (yechirume kufa) yevaviri kufa yakafanana, asi yekumberi kufa (yevakadzi kufa) yakasiyana.
Double-jekiseni anoumba anofanira kuiswa pamusoro kaviri-jekiseni Kuumbwa muchina kuti kubereka zvakajairika.
Matipi mukugadzirwa kweakaviri-jekiseni Moulds
1. Mould chinoumba uye mhango
Icho chinoumba chikamu chekaviri-jekiseni chakuvhuvhu chakangofanana neicho cheyakajairika jekiseni muforoma. Musiyano uripo ndewekuti chibhakera chejekiseni jekiseni munzvimbo mbiri chinofanirwa kutaridzika kunge chakafanana, uye concave mold inofanira kushandira pamwe nezvibhakera zviviri. Kazhinji, iyi mhando yemapurasitiki zvikamu zvidiki.
2. Ejection mashandiro
Sezvo iwo maviri-mavara epurasitiki zvikamu zvinongogona chete kukuvadzwa mushure mechipiri jekiseni, iyo yekuparadza mashandiro pane yekutanga jekiseni mudziyo haishande. Kune yakatwasuka inotenderera jekiseni muchina, ejection mashandiro ejekiseni muchina inogona kushandiswa ejection ejection. Kune yakatwasuka inotenderera jekiseni muchina, ejection ejection mashini ejekiseni muchina haigone kushandiswa. Hydraulic ejection ejection ejection ejection mashandiro anogona kuiswa pane rotary tafura.
3. Gating Sisitimu
Nekuti iri kaviri-jekiseni kuumbwa, iyo gating sisitimu yakakamurwa kuita imwechete jekiseni system uye yechipiri jekiseni system, ayo ari zvichiteerana kubva maviri jekiseni kuumbwa michina.
4, Kugadzikana kweforoma zvigadziko Nekuti iyo mbiri-jekiseni nzira yekuumba yakakosha, inoda kushandira pamwe nekubatana pamwe neumwe neumwe, saka saizi uye kunyatso kweiri maviri maviri efa gwara rekushandisa zvinofanirwa kuenderana. Kune yakatwasuka inotenderera jekiseni kuumbwa, iyo yekuvhara kukwirira kweiyo mafuru inofanira kunge yakafanana, uye pakati pezvakaumbwa zviviri zvinofanirwa kunge zviri pane imwecheteyo inotenderera nharaunda, uye mutsauko uri 180. Kune yakatwasuka ichitenderera jekiseni kuumba muchina, maviri maviri maviri eforoma inofanirwa kunge iri pane imwechete axis.
Kubudirira kwekaviri-jekiseni kuumbwa
Kubva pane hunhu uye mashandisiro eakawandisa-jekiseni jekiseni kuumbwa uye maviri-zvinhu co-jekiseni kuumbwa, zvinogona kuoneka kuti pachave nemamiriro ekuti zvishoma nezvishoma kutsiva echinyakare jekiseni kuumbwa maitiro mune ramangwana. Innovative jekiseni Kuumbwa tekinoroji kwete chete inovandudza iyo chaiyo yejekiseni kuumbwa maitiro, asi zvakare inovhura iyo munda wejekiseni kuumbwa maitiro. Innovative ejection michina uye maitiro akakwana kuzadzikisa kuwedzera kuri kudiwa kwemhando dzakasiyana, mhando yepamusoro uye yakakwira kukosha-yakawedzerwa zvigadzirwa.
Mestech inopa kaviri jekiseni moldinnng pane kesi dzemotokari, zvigadzirwa zvemaoko zvigadzirwa, masipika housings, makiyi mabhatani, mapfumo uye mamwe maviri-ruvara kana maviri zvigadzirwa zvigadzirwa kwemakore, ndapota taura nesu kana paine kudiwa.
Pashure: Plastiki jekiseni muchina
Zvadaro: Zvikamu zvepurasitiki zvemwenje usina mumvuri